नेपालमा जातिय द्धन्द्ध भड्काउन रुपा सुनारलाई युरोपेली युनियनले सुटुक्क डेढ करोड दिएको खुलासा ! - Mitho Khabar
June 28, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on नेपालमा जातिय द्धन्द्ध भड्काउन रुपा सुनारलाई युरोपेली युनियनले सुटुक्क डेढ करोड दिएको खुलासा !
काठमाडौ । नेपालमा जातिय द्धन्द्ध भड्काउन युरोपेली युनियनले अनेक रुपमा भूमिका खेलिरहेको तथ्य यसअघिपनि आएको हो ।
अहिले भने सेलिब्रेटी युवती प्रयोग गरेको खुल्न आएको छ । यो पटक युरोपेली युनियनले इमेज च्यानल टेलिभिजनमा लोकभाका सम्बन्धि कार्यक्रम चलाउने लोक गायिका रुपा सुनारलाई प्रयोग गरेको सूचना बाहिर आएको हो ।
केही दिनयता जातीय मुद्दालाई लिएर चर्चामा आएकी उनलाई कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने शीर्षकमा डेढ करोड रुपैयाँ दिएको खुल्न आएको हो ।
उनले काठमाडौंको बबरमहल स्थित घरधनी सरस्वती प्रधानले दलित भएकाले जातकै आधारमा कोठा नदिएको भन्दै सुनारलाई मुद्दा हालिन् ।
तर, रुपामाथि जातिय विभेद भएको प्रमाण भने मिलेन र हिरासतमा पुगेकी घरधनी प्रधान तीन दिनमै रिहा भइन् । उनले सार्वजनिक गरेको अडियोमा समेत आफूलाई समस्या नभएको तर कोठा दिन नै मा (आमा) लाई आपत्ति भएका कारण दिन नसक्ने प्रधानको भनाई थियो ।
तर उनले बारम्बार आफूलाई जातमा कुनै समस्या नरहेको आफ्नो घरमा बारम्बार आउन निमन्त्रणा समेत दिएको सुनारले नै सार्वजनिक गरेको अडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
हामीलाई समस्या छैन नानी मा ले चै मान्नुभएन । कहिले काही आउँन है नानी एकदमै प्रेमपूर्वक जातिय सद्भाव प्रधानले देखाएको अडियोमा सुन्न सकिन्छ । अब मुद्धा लाग्ने नै भए प्रधानकीपनि बयोबृद्धा महिला आमालाई लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
उसो त नेपालमा दलित भनिने समुदायभित्रै पनि तल्लो–उच्च जात भनेर विभेद छ । अर्कातिर नेपालमा अशिक्षित पुस्तामा तल्लो र उच्च जात भनेरै शिक्षा लिएका र जातको श्रेणीलाई स्वीकारेका मानिसहरुको बाहुल्यता अझैं बढी छ ।
झनै अहिले राज्यले दिएको आरक्षण कोटाका कारण विभेद भएको भन्दैपनि जबरजस्त मुद्धा उठाइएको छ । भलै जे होस् यो विषयमा जबरजस्त मुद्धा उठ्न थालेको छ । नेपालका पछिल्ला शिक्षित युवा पुस्तामा कुनै जातिय विभेद छैन । उनीहरु एक अर्कामा घुलमिल छन् ।
पछिल्लो समय शिक्षित पुस्तामा जातिय विभेद् हराउँदै गएको छ । यद्यपि, विश्वकै विकसित मुलुक अमेरिकामा समेत कालोजातिको बिषयलाई लिएर मुद्दा चलिरहेकै देखिन्छन् ।
नेपालमा भने जातीय मुद्दा अशिक्षित र पूरानो पुस्ताबाट भएका त्रुटिहरुको बिषयलाई लिएर समाजमा भाँडभैलो मच्चाउने तत्वहरुको बिगबिगी बढेको छ । यसमा युरोपियन युनियनले बेला बेला खेल्ने गरेको आरोप छ ।
नेपालमा जातीय द्वन्द्व भड्काउन कयौं विदेशी संघसंस्थाहरुले करोडौं रुपैयाँ दिएको खुलासा भइरहेका बेला युरोपियन युनियनपनि मुछिएको छ ।
४ जात ३६ वर्णको फुलबारी भनेर सजिएको देश विस्तारै शिक्षित हुँदै विभेदबाट माथि उठेर अघि बढ्न खोजिरहेका बेला कथित तल्लो जात भनाउँदा समुदायकै मानिसहरुले विदेशी डलर गोजीमा हालेर देशमा जातिय द्धन्द्ध भड्काउन खोजेको पाइएको हो ।
पछिल्लो समय युरोपेली युनियन (ईयु) ले चोर बाटोबाट नेपालका जातिय विभेदको विरुद्धमा अभियान्ताहरुलाई डलरमा भुक्तानी पैसा दिएर जातिय द्धन्द्ध सुरु गराउन खोजेको देखिएको हो ।
स्रोतका अनुसार चर्चामा आएकी रुपा सुनारलाई समेत ईयले यसै मुद्दाका लागि झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ दिएको छ । सो पैसा ईयु निकट संस्थाले सुनारलाई दिएको स्रोतको दावी छ ।
यो तथ्य बैकहरुले पुष्टि गरेका छन् । एक बैकका अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने रुपा सुनार नामको खातामा एकै पटक यति ठूलो रकम राख्न आग्रह आएपछि हामीलेपनि त्यो रकमको स्रोतको बारेमा खोजी गरियो । पछि धेरै वटाको खातामा मिलाएर लगिएको छ । आवश्यक पर्दा प्रमाण दिन सक्छौ उनले भने ।
शिक्षित हुँदै र मानसिक विकास हुँदै अघि जातभात बिर्सेर नेपाल आफै अघि रहेका बेला यस्ता भड्कावपूर्ण हर्कतले जातिय विभेदलाई झनै सक्रिय बनाउने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
तर, पैंसाको पछि लागेर देशमा जातीय द्वन्द्व भड्काएर देशलाई अशान्त बनाउन लागि परेका यस्ता तत्वहरुलाई बिर्सेर समानताको बाटोमा हिड्न जरुरी रहेको देखिएको छ । जनबोली बाट
पूर्वयुवराज पारसलाई निर्मल निवास बस्ने अनुमति, कतातिर तिर लागिन् हिमानी
September 16, 2020 mithokhabar
लकडाउन फेरि यति दिनसम्म बढाउने तयारी, आजको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने